Iinoveli ezi-6 zembali. UDe Roa, uPellicer, uLara, uDurham, uAurensanz kunye noMolist | Uncwadi lwangoku
Iinoveli ezi-6 zembali. UDe Roa, uPellicer, uLara, uDurham, uAurensanz kunye noMolist
Iiholide, ulwandle, ichibi lokuqubha, indawo yokulala elangeni, iminqweno engapheliyo, ixesha lasimahla ... Ukukhangela ukungabikho koqhagamshelo phakathi kwesithambiso, ibhola, i-ayisi khrim kunye neziselo. Ukuzivocavoca imemori, zezinye iinkumbulo zamanye amahlobo, ngamanye amaxesha. Kwaye ingqondo ekhululekileyo yokufumana amanye amabali.
Ezi ziinoveli zembali ezi-6 ngababhali aba-6 abawaziyo amabali afana noJorge Molist, Sebastián Roa okanye uCarlos Aurensanz. Kodwa bangoDavid A. Durham, uJavier Pellicer kunye no-Emilio Lara.
1 Imvukelo- UDavid A. Durham
2 Umenzi wewotshi ePuerta del Sol-Emilio Lara
3 Ingoma yeGazi kunye neGolide-uJorge Molist
4 Iingonyama zikaHannibal - uJavier Pellicer
5 Inkosi yokungcakaza - uCarlos Aurensanz
6 Ingcuka ye-al-Andalus - Sebastián Roa
Uvukelo -UDavid A. Durham
Le yincwadi entsha evela kumbhali othengisa kakhulu Ibhongo leCarthage. Ijiko elitsha kumfanekiso ongafiyo I-Spartacus, igiladiator eyaziwayo, nemvukelo yamakhoboka awakhokelayo waphantse woyisa iRoma nemikhosi yayo eyayingoyiki. I-American Durham, ikwangumbhali weentsomi ezimangalisayo, isixelela ukuba yeyiphi eyona mvukelo idumileyo embalini kwiindawo ezahlukeneyo ezichaseneyo.
Baya kuba ngabakhe I-Spartacus, i-gladiator ukuzimisela kwayo kwaye, ngaphezu kwayo yonke, i-charisma enkulu ijika ikhefu kwintolongo ibe yimvukelo yeenkcubeko eza kuthi icele umngeni kubukhosi. Kwakhona oko I-Astera, oonxibelelwano lwayo nelizwe lemimoya kunye nemimoya yalo iya kukhokelela kuphuhliso lwemvukelo.
Siphinda siyibone ngamehlo Nonnus, un Ijoni laseRoma ohamba macala omabini engxabano kwilinge lokusindisa ubomi. Kwaye kwezo ULaelia noHustus, amakhwenkwe amabini angabelusi ezihamba namakhoboka. Kwaye siyibona kwicala laseRoma, nge UKaleb, Ikhoboka kwinkonzo kaCrassus, le ndlu yeeNgwevu neyaseRoma yayalela ukuba kutyumze abantu ukuba bavukele nje.
Umenzi weewotshi ePuerta del Sol -Emilio Lara
ULara, jiennese, ugqirha kwiAnthropology kunye nesidanga kuLuntu, usisa Ngo-1866 eLondon kwaye usazisa ngembali indoda yokwenene engaziwa kubafundi abaninzi. Ibiyi UJose Rodriguez Losada, umenzi weewotshi waseLeonaus owakha iiwotshi ezimbini ezidumileyo emhlabeni, leyo ye UPuerta del Sol kunye noBig Ben.
Kwinoveli, ngenxa yezizathu zezopolitiko iLosada inayo elubhacweni waseSpain okholelwa ngokugqibeleleyo uFerdinand VII kwaye ngoku uhlala eLondon, apho azakufumana khona umyalelo ongxamisekileyo lungisa iben enkulu. Kodwa kukho umntu ovela kwixesha lakhe elidlulileyo omjongileyo ukuba aphelise ubomi bakhe. Kodwa okwangoku, uJosé uhlala kuphela kwaye usebenza ekwakheni iwotshi ngomatshini wotshintsho. Umbuzo uya kuba nokuba uza kuphumelela okanye hayi.
Ingoma yegazi negolide -UJorge Molist
Enye yeempawu ezinkulu zohlobo lwembali yiMolist kwaye le noveli ibikhona Ibhaso likaFernando Lara kulo nyaka. Kuyo usixelela ibali lika UConanza, oneminyaka elishumi elinesithathu kuphela, kufuneka alushiye usapho, ilizwe lakhe nayo yonke into ayithandayo yokutshata umntu wasemzini omdala kakhulu kunaye. Uyise, ukumkani waseSicily, isengozini enkulu kwaye ifuna olo manyano. Kodwa UCharles waseAnjou, umzalwana kaKumkani waseFransi, Ungena ebukumkanini kwaye uyabulala.
UPeter III, Umyeni kaConstanza uthweswe isithsaba njengoKumkani waseAragon kwaye uthembisa ukuba uya kuphindezela uyise kwaye abuyise kwakhona ubukumkani obuyindlalifa yakhe. UPeter, othathwa njengokumkani obuthathaka, ujongene nala magunya makhulu makhulu enkulungwane yeshumi elinesithathu: iFrance, upopu noCharles waseAnjou, bajika baba ngumlawuli waseMeditera.
Iingonyama zikaHannibal -UJavier Pellicer
Umbhali waseValencian uveza inoveli yakhe entsha apho siya khona Usingasiqithi Iberia ukususela ngenkulungwane yesi-XNUMX BC. C. Inkokeli yemikhosi yaseCarthage UHannibal Barca kwaye kuzo izizwe ezininzi zaseIberia zihlanganisana eziye zamjoyina. UHannibal ufuna ukoyisa iRoma, ngenxa yoku, Ndiza kuwela iAlps kweyona nto inkulu eyenziwe ngumntu de kube lelo xesha. Apho uya kujongana UPaplius Cornelius Scipio nemikhosi yakhe, eya kuwela phambi kwakhe. Okwangoku ...
Inenkwenkwezi ngabalinganiswa abathathu ngokwahlukileyo: Leukon, umCeltiberian ojoyina umlo eshiya isithandwa sakhe ngasemva; UAlcón, I-Saguntine Iberia yahlukunyezwa sisazela sokungcatsha umbuso; Y Ithebhu, Igosa laseCarthage eligcina imfihlo engathethekiyo.
Inkosi yokungcakaza - UCarlos Aurensanz
Elinye igama elidumileyo lohlobo kunye nombhali we-trilogy ye Banu qasi, lo mbhali waseNavarrese usinika le noveli intsha.
Sikwi ubukumkani baseNavarre ngo-1188. UTudela uhlala kwiNkundla kwaye uhlala umzuzu wokusebenza kakuhle. Isixeko sonke siyatshintsha emva kokugxotha amaSilamsi. Inkqubo ye- ibandla elitsha lokudibana Kuyakhiwa kwaye kuyafuneka ukuba uhlale kwindawo yemosque endala. Nicolás, umfundi ofunda ilitye lemvelaphi yaseBurgundi, usebenza ekudilisweni kwayo xa indlela yabahambi ngelitye ibonakala ngathi iyahamba phantsi kweenyawo zakhe.
Xa ebuya ebusuku uya kufumanisa i-crypt efihliweyo kwaye, kuyo, kubonakala ukuba ulibele, ibhokisi AmaSilamsi ane isikhumba ngaphakathi. Oko iya kuba kukufumanisa okungaphawuli kuphela ikamva lakhe, kodwa oko kwakhe wonke umntu owaziyo ngobukho bakhe, bobukumkani baseNavarre uqobo kwaye, mhlawumbi, nalo lonke iNgqobhoko.
Ingcuka ye-al-Andalus -USebastian Roa
Omnye umbhali wembali, uRoa unjalo I-Aragonese ngokuzalwa kunye neValencian ngokwamkelwa, kwaye inembali ende yempumelelo.
Kule noveli sikuyo phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX. Olokugqibela uhlanga olukhulu lwe UAl Andalus ngowona mzuzu ubalaseleyo. Kwaye kwintloko yobo bukumkani yindoda nomfazi: Ingcuka inkosi, inzala yamaSilamsi yamaKristu kwaye wafikelela kwitrone ngokuzimela kwakhe, eqinisiwe kwiimfazwe zasemdeni kunye nokujonga ngokuthembekileyo amanyathelo akhe namaKristu; kwaye oyithandayo, Zobeida, umfazi onobuhle obalaseleyo kwaye okrelekrele, ofuna ukuzalisekisa isiprofeto esingaqhelekanga.
Kodwa ngaphesheya kweStrait balola izixhobo zabo Imikhosi yeAlmohad, umatshini wezomkhosi ulawulwa yimpambano eye yashiya iintaba zaseAfrika ukutshabalalisa amakristu. Okwangoku, amaKristu e-Iberia Peninsula abonakala ekhathazeke ngakumbi ngokubambisana kunokuba amanyane ukukhusela umhlaba. A) Ewe, nguKing Wolf kuphela noZobeyda abemi phakathi kwabahlaseli kunye nookumkani basentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iinoveli ezi-6 zembali. UDe Roa, uPellicer, uLara, uDurham, uAurensanz kunye noMolist
Mnumzana Tim O'Theo weRAF. Iiklasikhi zaseBruguera zibuyile kuba ...
Abacuphi abali-10 awuyi kukwazi ukuyeka ukufunda kweli hlobo.